Ka Ilaalinta Qalabka Ka Dhaca Jidh-dilka: Talooyin Ku Saabsan Cimilada
Maadaama e-mail soo baxday, spam wuxuu ahaa barta websaydhka. Sideen u qeexi karnaa si sax ah? Ereyada fudud, emaamaada spam waxay tixraacayaan nooc ka mid ah waxyaabaha qashinka ah ee aan la dooneynin qofka qaataha leh. Xaaladaha intooda badan, waa email keliya oo leh xayeysiisyo, kuwaas oo loo diro cinwaanno kala duwan oo aan marnaba u qoondeeynin inay helaan waxyaabahaas oo kale - ventilatori per interno da soffitto migliori. Spammers waxay doorbidaan inay isticmaalaan habab sida liiska iibsashada cinwaannada, tartanno been abuur ah, barnaamijyo goynin email ah, iyo bixinno bilaash ah oo liddi ku ah oo leh ujeedo ah in la dhiso liisaska emailkooda.
Oliver King, khabiir ku takhasusay Semt Adeegga Dijital ah, wuxuu ku siinayaa tilmaanta saxda ah ee sida loo ilaaliyo spam iyo fayrusyadaada.
Dhibaatooyinka ay keentay Spam Mail
Waxaa jira tiro ka badan sababaha ay tahay in laga fogaado helitaanka boostada spam. Qaar ka mid ah dhacdooyinka dhabta ah ee ka cabanaya waxaa ka mid ah fursadda inaad halis u tahay xatooyadaaga aqoonsiga ama aad u ogolaatid hacker inuu kuugu soo galo qalabka feylalka iyo fayraskaaga qalabkaaga. Xaaladaha ugu xun, xitaa waxaa lagugu soo oogi karaa dambiyada websaydhka haddii aad ka caawisay xakamaynta miyir la'aanta..Xaaladahaas oo kale waxaa ka mid ah in la xakameeyo waxyaabaha la xaday ama lacagta la dhaqay. Habka ugu wanaagsan ee lagu falanqeeyo farriinta spam ayaa si fudud u tirtiraysa. Sida fikradda guud, marka aad aragto wax aad u fiican oo aad ugu baahan tahay inaad ku biirto, iska ilaali.
Sida Loo Helo Naftaada Spam Mail
Inkastoo ay adagtahay in laga fogaado waraaqaha isbaarista, laakiin si weyn ayaad u yareyn kartaa oo xitaa tirtiraysaa tirada spam ee kuugu imaanaya sanduuqaaga adigoo isticmaalaya codsiyo ka-hortag ah spam. Iyadoo horumarka sir-farsameedka, inta badan falanqeeyayaasha anti-spam ayaa dhab ahaantii ogaan kara taas, content waa sharci ah iyo fariimahooga ay yihiin spam iyada oo dadka faragelinta xadidan. Haddii ay dhacdo in feylka spam ay ku fashilmaan in ay ogaadaan fariin spam ah, milkiilaha cinwaanka emailku wuxuu ku dari karaa content. Marka sidaas la samaynayo, filterku wuxuu aqoonsan karaa hanjabaad cusub.
By samaynta codsi badbaado internet oo wax ku ool ah, waxaad si aad u yar u yareyn kartaa hanjabaadaha emailka spam adigoo hubinaya in aysan u helin habka aad ku heli karto sanduuqaaga iyo qaybaha kale ee muhiimka ah. Intaa waxaa dheer, inta badan codsiyada ammaanka internetka ayaa hubiya in dadka isticmaala laga ilaaliyo hanjabaadaha phishing, taas oo noqon karta mid aad u fiican xaaladaha e-maylka loo arko in ay run yihiin marka aysan ahayn. Iyada oo ku xiran xaqiiqda ah in emails ay codsanayaan faahfaahinta bangiga, ilaalinta phishing waa muqaal muhiim ah oo ka mid ah qalabka anti-spam.
Ku-oolnimada Codsiga Ammaanka Bakhaarka
Marka la iibsado software-ka anti-spam, waxaa muhiim ah in la doorto baakad ku xiran amniga antivirus sababtoo ah qayb ka mid ah farriimaha spam waxaa hareereeya khayaanada iyo fayrasyada. Adigoo rakibaya codsi hal software ah oo ku saabsan kombiyuutarkaaga, waxaad fududeyneysaa si aad u ballaariso habka loo xaqiijinayo xogtaada inta aad xoojinayso kalsoonidaada nidaamkaaga. Inkasta oo barnaamijyada anti-spam ay leeyihiin karti ay u leeyihiin in ay ka soo rogaan content ka soo sanduuqyadaada, haysashada codsi antivirus la taaban karo waxay kaa caawineysaa in aad ilaaliso kombiyuutarka marka aad u furi kartaa fariin spam shil ahaan.